Cabdikariin Qalbi-Dhagax oo looga digay arrin laga cabsi qabo inuu sameeyo - Caasimada Online
Home Warar Cabdikariin Qalbi-Dhagax oo looga digay arrin laga cabsi qabo inuu sameeyo
Cabdikariin Qalbi-Dhagax oo looga digay arrin laga cabsi qabo inuu sameeyo
Nairobi (Caasimada Online)-Xildhibaanka u matala aqalka Barlamaanka Degmada Kamakunji ee Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi Yuusuf Xasan oo ka qeybgalay kulanka magaalada Nairobi loogu qabtay Kenya ayaa ka digay in Qalbi-Dhagax uu sabab u noqdo kala geynta Soomaalida.
Xildhibaan Yuusuf Xasan, ayaa sheegay in Qalbi-Dhagax uu heysto fursado badan, waxa uuna tilmaamay inay muhiim tahay inuu ka shaqeeyo wanaaga midnimada Soomaaliyeed., isla markaana ka fogaado wixii kala fogeynkara Umadda.
Xildhibaan Yuusuf Xasan, waxa uu Sargaalka ONLF Abdikariim Sh Muse Qalbi-Dhagax, u cadeeyay in dantii laga lahaa aysan aheyn la shaqeynta mucaaradka dowlada Somalia iyo dhinacyo gaara balse laga doonaayo inuu isku geeyo dowlada iyo jihooyinka mucaaradka ku ah si aan loo laqdabeyn dowlada iminka u curatay Somalia.
Xildhibaan Yuusuf Xasan, oo ka hadlay xaflad ka dhacday mid ka mid ah Hoteelada Magaalada Nairobi ayaa waxaa uu ugu baaqay Qalbi Dhagax in fursada uu heesto uu uga faa’ideeyo mideynta umada Somaliyeed.
Xildhibaaanka Kamakunji ayaa waxaa uu sheegay in aysan dani ugu jirin xiligaan shacabka Soomaliyeed tafaraaruq iyo kala tag balse loo baahan yahay in dadka indhaha u ah in ay marwalba ka shaqeyaan midnaanta si ay u soo noqoto karaamada iyo sharafta umada.
“Qalbi-Dhagax anaga kuuma taageerin inaad kala goyso Soomaalida waa inaad ka fogaataa kala geynta isla markaana taageertaa Somalia oo mid ah”
Geesta kale, Abdakriim Qalbi Dhagax oo maalmo ka hor gaaray magaalada Nairobi ee Caasimada Dalka Kenya kadib markii laga sii daayay xabsi ku yaal wadanka Ethiopia ayaa waxaa loo dhigayay xaflado lagu soo dhaweynayo in uu Markale Xornimadiisa Helay.